Odayaal kala hadlay Madaxweyne Farmaajo xariga Wasiir Janan - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Odayaal kala hadlay Madaxweyne Farmaajo xariga Wasiir Janan
September 11, 2019 at 04:44 Odayaal kala hadlay Madaxweyne Farmaajo xariga Wasiir Janan2019-09-11T04:44:06+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Odayaal Dhaqameedyo ka soo jeeda Jubbaland oo Magaalada Muqdisho u yimid in ay waan-waan ka galaan xariga Wasiirka Amniga Jubbaland, C/rashiid Xasan C/nuur (Janan) ayaa la kulmay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo).
Odayaashan oo ay wehlinayeen ganacsato iyo aqoonyahano ayaa Madaxweynaha Somaliya ka codsaday in xoriyadiisa dib loo siiyo Wasiirka Amniga Jubbaland, oo 31-kii bishii hore ee August lagu xiray Garoonka Aadan Cadde.
Madaxweynaha Somaliya ayaa ergada ka socoto Jubbaland u sheegay in dowladda oo qura aanayn ku dhegnayn Wasiir Janan, balse ay jiraan hay’ado caalami ah oo ninkaasi ku eedeynaya in uu gaystay tacadiyo ka dhan ah aadanaha.
Nabadoon Idiris Aadan Nuur oo ka mid ahaa Odayaashii Dhaqanka ee Madaxweynaha la kulmay ayaa sheegay in Madaxweynuhu uu u sheegay in hay’ado ka shaqeeya xuquuqul insaanka ay sidoo kale haystaan Wasiirka Amniga.
Nabadoon Idiris Aadan Nuur oo ku heyb ah Wasiirka Amniga Jubbaland ayaa tilmaamay in Madaxweyne Farmaajo uu ergada u sheegay in Wasiirka la horkeeni doono maxkamad, si cadaaladda loogu qaado, haddii eedeymaha loo haysto ay sax noqdaan.
Ergada ka socotay Jubbaland oo habeenkii Talaadadii Madaxweynaha Somaliya ugu tagey Villa Somalia ayaa Madaxweynaha ka soo laabtay, iyagoo ka rajo dhigay in xabsiga laga soo sii daayo Wasiirka, sida uu sheegay Nabadoon Idiris.
Nabadoonka oo la hadlay Radio Kulmiye ayaa yiri “Wuxuu Madaxweynuhu nagu yiri hay’ado caalami ah iyo dad ayaa dacweynaya, sidaas awgeed lama sii deyn karo, sharciga ayaana loo bandhigaya. Anagu waxaan samayn karnaa oo keliya inaanan ninkaasi cadaalad-darro lagu samaynin, in si cadaalad ah arrintiisa loo galo, sidaasaa samayn karnaa, laakiin sii deyn malaha.”
Nabadoonka ayaa xariga Wasiir Janan ku tilmaamay in ay ula muuqato arrin siyaasadeed inay tahay, maadaama Maxkamadda Gobolka Banaadir ay bishii April burisay eedeyntii loo soo jeedisay Wasiir Janan, ee ahayd in dad rayid ah uu ku dilay Deegaanada Jubbaland.
“Caqli ahaan iyo maskax ahaan anaga waxay noola muuqatay arrimo siyaasadeysan inay tahay, sababtoo ah hadda ka hor waxaan arkeynay Maxkadda Gobolka Banaadir oo kiisaska hadda lagu eedeynayo daaqadda ka tuurtay oo arrintaas beenisay.”
Dadka qaarkii ayaa xariga Janan u arka mid la xiriira khilaafka Maamulka Jubbaland kala dhaxeeya Dowladda Federaalka Somaliya.
« Sababta aysan kuugu wanaagsaneyn inaad maalmo yar shaqeyso
Dagaal faraha looga gubtay oo dhex maray Ciidanka Kenya & Shabaab »